राधामाथि कुटपिट हुँदा रमिते बनेका मेयरलाई कसले हान्यो गोली ? अवस्था चिन्ताजनक ! — Sanchar Kendra
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथि अज्ञात समुहले गोली हानेको छ । चौधरीलाई उनको घरैमा गोलीहानिएको हो । सोमबार साँझ आएको करिब १० जनाको समूहमध्ये एकले मेयर चौधरीमाथि गोली प्रहार गरेको हो ।
त्यही समूहमा रहेका अर्का व्यक्तिले चौधरीको टाउकोमा खुकुरी समेत प्रहार गरेका छन् । सुख्खडस्थित घरैमा आक्रमणबाट घाइते भएका चौधरीलाई अहिले घोडाघोडी अस्पताल सुख्खडमा भर्ना गरिएको छ ।
उनको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख एसपी विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार चौधरीको पेट र कम्मर आसपासमा छर्रा लागेको छ ।
सोही नगरपालिका निवासी राधा चौधरीलाई बोक्सीको अारोपमा ६ घण्टासम्म यातना दिँदा समेत रमिते बनेको अारोप लागेको थियो । यस्तै चौधरीमाथि कुटपिट हुदा पीडकहरुलाई संरक्षण दिएको आरोप समेत लागेको थियो ।
मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेर फरार भएपछि चौधरीको स्थानीय घोडाघोडी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । यस्तै अन्यत्र लाने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
राधामाथि कुटपिट भएको घटनापछि ममताप्रसादले यस्तो विवादास्पद अन्तरवार्ता दिएका थिए ।